Shabaab oo lagu eedeeyay inay dad rayid ah ku dileen deegaanka Ceel Cali - BBC News Somali
Image caption Xarakada Al-Shabaab ayaa deegaanka Ceel Cali la wareegtay maalintii Talaadada
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceel Cali oo qiyaastii 75 km dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in xalay halkaasi lagu dilay afar qof oo labo ka mid ah ay ahaayeen nabadoono deegaanka si weyn looga yiqiinay.
Sida ay BBC-da u sheegeen dadka deegaanka afarta qof ee la dilay ayaa la kala yiraahdaa Nabadoon Maxamuud Xaayow oo 75 jir ahaa iyo Nabadoon Biriq Maxamuud Cabdulle oo 85 jir ahaa iyo labo nin oo dhalinyaro ah oo lagu kala magacaabo Cabdiwahaab Buurfuule iyo Ibraahim Nuur.
Dadka deegaanka ayaa dilkan ku eedeeyay Xarakada Al-Shabaab oo shalay barqadii qabsatay Ceel Cali kaddib markii ay halkaasi isaga baxeen ciidamada Itoobiya iyo kuwa dawladda Soomaaliya.
Al-Shabaab ayaa waxa ay xirxireen dad ka badan labaatan qof oo deegaanka ah lamana oga waxa ay ka yeeli doonaan.
Ma jiro war ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aaddan dilka afarta qof iyo xariga dadka ka badan labaatanka, balse dadka deegaanka ayaa rumeysan in sababta loo dilay afarta qof ay tahay, in Shabaabku tuhmeen in ay la shaqaynayeen maamulkii dawladda ee Ceel Cali iyo ciidamada Itoobiya ee halkaa isaga baxay.